Faalo: Nuxurka Wada hadalkii Farmaajo iyo Imaraadka, ma aheen sida loo sheegay | Somaliweyn.org	Home
Monday, April 17th, 2017 | Posted by admin | 170 views	Faalo: Nuxurka Wada hadalkii Farmaajo iyo Imaraadka, ma aheen sida loo sheegay
Waxaan ka akhriyay Internetka qoral laga soo xigtay wargayska Geeska Afrika oo ka hadlaya shan qodab oo uu Cabdillahi Farmaaje ka codsaday dhaxal sugaha Isu-tagai Imaaradka Carabta Sheekh Maxamed Bin Zayed. Warkani oo uu wargaysku yidhi waxaanu ka helnay ilo diplomaasiyadeed oo xog ogaal ah.
Qodabadani waxay ahaayeen:
1) In Imaaraadka Carabtu Somaliya ka caawiyo dhismaha military.
2) In loo dhiso loona qalabeeyo xafiisyada dawlada Muqdisho.
3) In Imaaraadku carabtu joojiso la macaamulka maamul goboleedada dawlada Somaliya.
4) In shaqaalaha Somalida ee ka xoogsada dalkaasi ee sita baasaboorada Somaliya, la siiyo sharciyo caruurtooda wax barasho bilaasha ah. Iyo
5) In saldhiga milatari ee Berbera la hoos keeno dawlada Muqdisho.
Waxaa hubaala in qodabadani iyo jawaabta uu qoray wargayska Geeska Afrika uu ka soo baxay wasiirka propoganda Xukumada Fedaralka Somalia, Yusuf Garad.
Haddaba, warka aanu ka helnay dad xogagaala oo ku dhaw dhaw dawlada Isu-taga Imaaradka Carabta waxay noo sheegeen war kan ka duwan.
Somalidu waxaa tidhaahda wax ha laguu sheegee MAANKAGA la kaasho.
Shirka xukumada Fedaralka ee Somalia iyo dalka Isu-taga Imaaradka Carbta waxuu ka dhacay dalka Imaaraadka. Wafdiga Somalia oo ka koobnaa Cabdillahi Farmaje iyo Yusuf Garad, waxaa kale oo ku wahelinayay wakiilka Qaramada Midoobay u wakiisheen Somalia Michael Keating. Xaga Isu-taga Imaaradkana Carabtana waxaa hogaaminayay Sheekh Maxamed Bin Zayed.
Cabdillahi Farmaje (President Chees) waxay u sheegay Sheekh Maxamed Bin Zayed in heshiiska Saldhiga Ciidanka ee dawladiisu la gashay dawlada gobaleedka Somaliland, uu xadgudub ku yahay madax banaanida, qaranimada Somalia iyo qawaaniinta qaramada midoobay. Sidaa daradeed, waxay ku gar naqsadeen in qaramada midoobay ay labada dal dhex dhexaadiso.
Haddaba, Sheekh Maxamed Bin Zayed waxuu ugu jawaabay in uu dalkiisu ka wado dalkiisa mashruucyo horumarineed oo dhaqaalo badan ($442 Million) ka galayo. Marka, waxaa uu waydiiyay Farmaaje: Miyaad ka soo horjeeda maalgashiga aanu ku balaadhinayno dekada Berbara? Waxay laga yeedhsiyay MAYA.
Haddaba, saldhigani Ciidanka waxaanu ku ilaashinaynaa hantida badan oo aanan u haysan wax daman ah (ama collateral). Sida daradeed, ciidanku waxuu ilaalinaya hantidayada iyo nabada gobalka.
Haddii aad danaysaan in aydun qayb ka noqotaan heshiiska saldhiga, anagu waxba kama qabno ee Hargaysa safarkiina naga sii horeeya, anaguna waan idinkaga daba iman doonaaye.
Markii ay xaqiiqda hor timid Farmaaje iyo Yusuf Garad, ayuu hadalku iska soo xidhay.
Haddaba, halkaasi ayuu ku soo xidhmay dacwada ay Farmajo (President Chees) iyo Yusuf Garad ku sheeganayeen in heshiiska saldhiga iyo dekada Berbera Dawlada Fedaralka ay qayb ka ahaato.
Waxaa Cabdillahi Farmajo iyo Yusuf Garad waydiiyeen Sheekh Maxamed Bin Zayed, heshiiska Somaliland waxaa ula gasheen siddii ay Somaliland tahay dawlada madax banana. Marka ma aqoonsi ayaad siinaysaan Somaliland?
Waxaa loogu jawaabay, hawshaasi Somalida ayay u taalaa, in aad kala go’aysaan iyo in dal kaliya sii ahaanaysaan. Horana wada hadalo idin dhexeeya waanu hirgalinay, iminkana diyaar ayaan u nahay in aanu idin dhex dhaxaadino.
Markaa, markii waxay u socdeen, waxba uga socon wayay, ayaa Sheekh Maxamed Bin Zayed u balan qaday inuu gargaar bini aadnimo uu siinayo Somalida, uuna ka caawin doono biyahay iyo caafimaadka.
Waxaa kale waydiisteen in safiirka UAE Muqdisho u joogay uu dalka dib ugu soo laabto.
Haddaba, markii shirkii ka soo baxeen; ayaa wasiirka Propoganda Xukumada Fedaralka Somalia Yusuf Garad, uu twitter-kiisa soo dhigay qoralkani:
“Waxay isla qireen in ay madaxbanaanida iyo midnimada Somaliya ay yihiin lama taabtaan, ayna muhiim u yihiin amniga iyo iskaashiga labada dhinac”.
Haddalkaasi, haddii uu dhab yahay. Yusuf Garad Tiwitter-kiisa muu soo dhigeen ee waxaad arki lahayd Cabdillahi Farmaje iyo Sheekh Maxamed Bin Zayed oo warmitiyad public u soo wada saaray.
Adiguba caqli ayaad leedahay, hadalkaasi dawlada Isu-taga Imaraadka Carabtu ma odhan lahayd, iyada oo dhaqaalaha millions dollar ah maalgashanaysa Somaliland, isla markana heshiis saldhig ciidan la gashay Somaliland. Waxaa la yidhi been sheeg lakiin mid run u eg sheeg.
Teeda kale, haddii uu heshiiskani siday u rabeen u dhici lahaa, Idacadaha VOA & BBC Somaliga ee Propaganda Dawlada Somalia bunbuuniya ayaa ina wareerin lahaa.
By Omar A. Yousuf
Short URL: http://somaliweyn.org/?p=579
Posted by admin on Apr 17 2017. Filed under Faallo.
Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.	1 Comment for “Faalo: Nuxurka Wada hadalkii Farmaajo iyo Imaraadka, ma aheen sida loo sheegay”
SIMAD UNIVERSITY	May 26, 2017 - 10:15 pm	… [Trackback]
[…] Informations on that Topic: somaliweyn.org/2017/04/17/faalo-nuxurka-wada-hadalkii-farmaajo-iyo-imaraadka-ma-aheen-sida-loo-sheegay/ […]